Adan Barre Ducale: “Xildhibaanimada Baarlamaanka Kenya haddii aan ku weynayo xitaa kama tanaasulayo Soomaalinimada” – Maanta Online
Adan Barre Ducale: “Xildhibaanimada Baarlamaanka Kenya haddii aan ku weynayo xitaa kama tanaasulayo Soomaalinimada”
Soomaalida degan gobolka Waqooyi Bari Kenya ayaa waxaa soo wajahay culeysyo fara badan oo dowladda Madaxweyne Uhuru Kenyatta ku heyso tan iyo markii dalkaasi uu ka dhacay tirakoobka dadweynaha, ayaa natiijada dowladdu ka soo saartay tirada dadka Soomaali Kenyanka ah waxaa ka carooday xubnaha dowladda iyo golayaasha ugu jira xukuumadda dalka Kenya.
Kulan maalintii shalay dhex maray xildhibaano, siyaasiyiin, madaxda Soomaalida iyo odayaasha gobolka waqooyi bari Kenya waxay uga hadleen sidii ay mowqif mideysan uga qaadan lahaayeen tabashooyinka shacabka Soomaalida Kenya ay ka qabaan dowladda dalkaasi.
Arrimaha laga wadahadlay waxaa ka mid ah: sidii dowladdu wax uga qaban lahayd horumar la’aanta ka jirta degmooyinka gobolada Waqooyi Bari, in dowladdu hoos u dhigto xarigga iyo tacadiyada loo geysto dhallinyarada Soomaalida Kenya iyadoo lagu eedeynayo inay xiriir la leeyihiin ururka Al-Shabaab.
Guddoomiyaha aqlabiyadda Baarlamaanka dalka Kenya Xildhibaan Aadan Barre Ducaale oo ka mid ahaa mas’uuliyiintii kulankaasi ka qeyb galay ayaa khudbad qiiro leh u jeediyay ka qeyb galayaasha shirkaas, isagoona si toos ah ula hadlay xubnaha Soomaalida ah ugu jira Dowladda Kenya.
“Xildhibaanimada Baarlamaanka Kenya haddii aan ku weynayo xitaa kama tanaasulayo Soomaalinimada” ayuu yiri Xildhibaan Adan Barre Ducale oo ugu baaqay siyaasiyiinta u dhashay Soomaalida Kenya in la gaaray xilligii ay meel iska dhigi lahaayeen khilaafyada hoose ee u dhaxeeya una istaagi lahaayeen muujinta awooda ay leeyihiin.
Adan Barre Ducale ayaa sheegay in siyaasiyiinta Soomaalida Kenya looga baahan yahay inaysan u hor fariisan madaxda dowladda Kenya danahooda gaarka ah, balse ay dhabarka u xirtaan sidii loo soo dhicin lahaa xuquuqaha asaasiga ah ee ay leeyihiin shacabka Soomaaliyeed ee degan gobolka Waqooyi Bari Kenya.
Dhinaca kale Xildhibaan Adan Barre Ducale oo ahaa shaqsigii jebiyay xayiraadda Dowladda federaalka Soomaaliya ku soo rogtay magaalada Kismaayo, isagoona ka qeyb galay munaasabad lagu caleema saarayay Axmed Maxamed Islam (Axmed Madoobe) ee dib loogu doortay xilka madaxweynaha maamul goboleedka Jubaland, inkasta oo madaxweynayaasha dalalka Soomaaliya iyo Kenya dhowaan ka heshiiyeen khilaafyadii u dhaxeeyay.
Xafiiska wararka Maanta Online
← Guddoomiyaha madasha xisbiyada oo safiirka Mareykanka kala hadlay arrimaha xasaasiga ah ee Soomaaliya
Sacuudi Carabiya oo markii ugu horeysay hoggaamineysa dalalka ka tirsan G-20 →
KEYSE MAYOW: Gurmadka fatahaadda webiyada wuxuu keenay is jaceyl, dalladda SAFE iyana diyaar bay u tahay inay ka qeyb qaadato”
Kuuriyada Waqooyi oo shuruud ku xirtay heshiiska Niyukleerka.